विर्तामोडमा गुप्तां’ङ्ग का’टेर पुरुषको ह’त्या, यस्तो अवस्थामा भेटिय शःव – PathivaraOnline
Home > अपराध > विर्तामोडमा गुप्तां’ङ्ग का’टेर पुरुषको ह’त्या, यस्तो अवस्थामा भेटिय शःव
admin February 5, 2020 अपराध, समाज	0
काठमाडौं, २२ माघ । झापाको विर्तामोडमा एक युवकको श व फेला परेको छ । उनको गुप्ता’ङ्ग का टेर जलाएको अवस्थामा श व फेला परेको हो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। श व भारत बिहार राज्यस्थित अररिया घर भई हाल बिर्तामोड २ चारपानेमा डेरा गरी बस्ने अन्दाजी ४० वर्षीय सुभान शेखको भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले युवककै श्रीमती र सासु ससुरालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो । प्रहरीले सुभानका ससुरा रहमान, सासू रहाना शेखसहित उनकी श्रीमती शुष्मा शेखलाई नियन्त्रण मा लिएको जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिएका तीनैजनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा राखेर सोधपुछ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
शुष्माका श्रीमान् हराउनु र परालमा ज ले को अवस्थामा श व फेला पर्नुले श व सुभानकै भएको आशंकामा उनीहरुलाई नियन्त्रणका लिएर अनुसन्धान गरिएको हो । बिर्तामोड २ चारपाने निवासी ऐनकुमार राजवंशीको खेतमा राखेको पराल कुन्यूमा सोमबार ज लेको अवस्थामा श:व फेला परेको थियो। घटना स्थलनजिकै पुरुषको अ’ण्डकोष सहितको गुप्ता ङ्ग का टेर फालिएको थियो।
परिवारका सदस्यले प्रहरीलाई दिएको बयानअनुसार मृ तकले लगाएको कपडा शेखकै हुनुपर्ने आशंका गरिएको छ। घटना को प्रकृति हेर्दा ह त्या गरी घटनालाई ढाकछोप गर्न श:वलाई परालमा आ’गो लगाएर ज लाइ एको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीय ऐनकुमारको खेतमा राखिएको परालमा सोमबार राति १२ बजेदेखि आ गो लागेको थियो। सोही ठाउँमा ज लेको अवस्थामा श व भेटिएको हो।
वरिष्ठ पत्रकार दुर्गानाथ शर्माको निधन भएको छ।उनको २४ वर्षअघि ओपन हार्ट सर्जरी गरिएको थियो।इन्फेक्सनको समस्या भएपछि उनलाई हिजो राति ८ बजेमात्र मनमोहन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। मनमोहन अस्पतालमा उपचार क्रममा उनको आज बिहान निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ।नेपाल टेलिभिजनमा विश्व घटना नामक कार्यक्रम उनैले सुरू गरेका थिए। शर्माको जन्म इलाम जिल्लाको फिक्कलमा भएको थियो।
मलेसियाबाट आयो अर्को दु:खद खबर ! पेनाङ्गमा यी नेपाली युवाले गरे आ’त्मह’त्या
भक्तपुरकाे दरबार स्क्वाएरमै ऐतिहासिक केदारनाथ मन्दिरको उद्घाटन! जय श्री केदानाथकि जय लेखेर शेयर गराैं
झापामा केटाले केटालाई नै बिबाह गरेपछि गाउँलेहरूकाे यस्तो चासो (भिडियो हेर्नुस्)